प्रधानमन्त्रीज्यू, यी बुढो किसानको आँशुले तपाइँलाई छोएन ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > प्रधानमन्त्रीज्यू, यी बुढो किसानको आँशुले तपाइँलाई छोएन ?
January 8, 2020 January 8, 2020 GRISHI395
काठमाडौं : ठूलो भरोसा र आशा गरिएका प्रधानमन्त्रीमा पर्छन्, केपी शर्मा ओली । उनी भ्र’ष्टाचा’री, घुसखोरी, ठ’गी, अ’परा’धिवि’रु’द्ध र जनताको पक्षमा मिठो र आशा लाग्दो भाषण गर्छन् । सबैजनाले उनको भाषणप्रति विश्वास गरेका छन् । उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपाले अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व लिइरहेको छ । बहुमतसहितको सरकार चलाएका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताको आशा र भरोसामा हुनु स्वभाविकै हो । तर, जनताको आशा र भरोसप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा भा’इरल भइरहेको दुई किसानको तस्विरले प्र’ष्ट पारिरहेको छ ।
विनोद चौधरी र उनका छोरा विरुद्ध मुद्दा
यतिसँग सरकारको साइनो
January 24, 2021 January 24, 2021 News Desk